Kala yaaca & kala haadka Taliska Adis Ababa kusoo fooleh yaa u noolaada + Maanso- By: Xaaji M/rashiid | ogaden24
Kala yaaca & kala haadka Taliska Adis Ababa kusoo fooleh yaa u noolaada + Maanso- By: Xaaji M/rashiid
Jan 20, 2018 - Aragtiyood
Dalka sii dumaya ee itoobiya ayaan maanta gudaha u galayaa anigoo kawar bixinaya xaaladaha hoose intaan ka ogahay. Warbixinada lugtu waxay sheegayaan xaalado adag oo uu wadankaasi wajahayo. Guud ahaan waa lala socdaa inuu yahay wadan foolanaya oo sidkiisii dhamaaday. Sidaan ognahay wax foolanaya haduuna helin gurmad caawiya inuu silcayo waa la hubaa, inuu isku dhintana way dhici kartaa. Sidaa daraadeed wadanka itoobiya oo aad gurmad kadhaliya ugu baahan ma muuqato saan saan sheegaysa inay cidi usoo socoto! Maamulka cabudhinta dadka ku caanbaxay ee dalkaas kajiraayi waa mid indhaha isku sii qabsanaya. Waa maamul keeb layuurur ah kadib markay kusoo fataheen malaayiin cadhaysan oo qaraabadoodii la laayay, qaarna godad hoostood lagu guray!
XAALADDA NOLOLEED EE ITOOBIYA
Xaaladda nololeed ee hadda kajirta Itoobiya waa mid layaab leh. Siyaasadda maamul kasta oo itoobiya ka dhisma waxaa asal u ah in dadwaynaha lagula halgamo siduu faqiir u noqon lahaa. Siduuna marna u fikireen ee uu ugu mashquul sanaan lahaa maxaad maanta cuntaa, maxaad cabtaa iyo xageed qabowga iyo dabaylaha ka gashaa! Wadanku labadii sanoo ee u danbaysay si aad ah ayuu hoos ugu dhacay markii laga dhan walba. Shayga ugu muhiimsan insaanka agtiisa waa wax uu beerka iyo caloosha ku qabto, haduu waayana wuu laba qarxayaa mana jirto cid is hortaagi karta goortaas. Sidaa daraadeed markii shucuubta itoobiya gaajo, oon iyo arrad lagu dilay way laba qarxeen. Wadanka waxaa maalgashaday dad shisheeye ah, sida qadaadwayn oo ah Hindida, qolyaha cigaalka oo ah Carabta iyo indho buluugta oo ah Cadaanka. Waxay ka samaysteen mashruucyo waawayn oo kala duwan, hase ahaatee waakii sanad hore cagta lamariyay. In kasta oo la odhan karo shacbigu wuu guulaystay hadana arintii way saamaysay maadaama oyna wax u kaydsanaa uusan jirin!
Wadanka itoobiya oo caan ku ahaa cunida, baribarida, basbaaska, bunka, khamrida, iyo daafida ayaa maanta madaxa iskula jira. Qisooyinka cajiibka ah ee waqtigan kasocda waxaa kamid ah- shah la’aan baahsan, kadib markii wax qadhiidh ah(Sonkor ah) la waayay. Waxaa la sheegay in warshadii sonkorta lagubay, baabuurtii soo daabuli jirtayna dhexdaa loo galay oo waxaa warbaahinta laga daawaday iyagoo isla basbeelay. Si kastaba ha ahaatee dadyowgii itoobiya la isku odhan jiray waxaa ku habsatay bahal xaraaro ah oon horay loo arag. Hadii shaah lawaayay oo Bun lawaayay oo khamri lawaayay maxaad ku diidi inay bulsho wada xaaraysani qoolal isla dhici karto!. Nin dhalinyar ah oo maalmihii lasoo dhaafay ADIS kasoo dhoofay wuxuu ii sheegay in sonkorta fiilooyin dhaadheer loo galo isaguna uu kamid ahaa dadka fiilada gali jiray iyadoo ruuxiiba laga gadi jiray 3kilo! Si kastaba ha ahaatee wadooyinkii Adis soo gali jiray waxaa lagu jaray Dogobyo waawayn dad cadhaysani wax ka xoog badane!
XAALADDA BULSHADEED EE ITOOBIYA
Xaaladda bulshadeed ee itoobiya waa mid banaaka taala oo dadkii dhexdooda way coloobeen. Waa marka horee wax tigree ah lama arki karo oo budhkaa lasaarayaa sidii Dameer Masaajid galay. Waxay noqdeen wax qaxay iyo wax Qoriga xabadda dhuunta u dhigay oo lagu yidhi askari baad tahay ee is difaac, mana jirto si kale oo uu kujoogi karo degaan Qoowmiyad kale. Oromo iyo Axmaaro waa Bisad iyo Jiir oo la isma tusi karo. Waa siqiir colow sababtuna waxaa weeye Oromada oo aaminsan waxa dhafoorkan uyeelay ee qeyrkood kareebay inay axmaaro tahay. Dhanka Soomaalida iyo oromada oo ah laba qowmiyadood oo isku Milan woyaanahaa isku diray si adagna way isu xasuuqeen. Waxaan odhan karaa lama helayo laba
qowmiyadood oo si nabad ah u wada ceesha. Waxba hadal yaana ku daaline Wiilkii aan la kulmay wuxuu yidhi- ilahaybaa isoo dhaafiyay Adis ababa isagoo ku tilmaamay meel halis ah.
SIYAASADDA DIBADDA EE ITOOBIYA
Siyaasadooda dibaddu masoo dhawaanin markii la eego dhanka shacabka qurbaha jooga. Waxaa meesha kabaxay siyaasi woyaanaha matala oo dad soo hor istaaga. Waxaa lagu fashilayay fagaarayaalka caalamiga ah. Kadib waxay isku dayeen inay kulamo ku qabtaan safaaradahooha, balse dadkiibaa usoo dhuuntay oo intay ka hoos kaceen ku foodhiyay. Sidaasay Albaabkii shirarku ku xidhmeen haday gude tahay iyo haday dibad tahayba.
CALAFKOOD INUU TAGAY TIGREE CIDNA HA WAYDIININ-
CIIDANKIISII INUU KALA FIRXADAY CIDNA HA WAYDIININ-
CALANKOOD INUU DADKII GUBAY CIDNA HA WAYDIININ-
CAQLIGII INUU KABAALIDAY CIDNA HA WAYDIININ-
CANBAARAYN INAY WAJAHAY AAN CIDNA HA WAYDIININ-
CIDLA INUU CADOWGU TAAGANYAHAY CIDNA HA WAYDIININ-
CUTUBYOOYIN INAY BAXASANAYAAN CIDNA HA WAYDIININ-
CUDUDII INAA LAGA FASHILAY CIDNA HA WAYDIININ-
CARQALADO INAY KU HABSADEEN CIDNA HA WAYDIININ-
CEEBEEY TACAAL INAY TAHAY CIDNA HA WAYDIININ-
CASARKII INAY BANDOW TAHAY CIDNA HA WAYDIININ-
CUUDKOODII INAY KA CARAREEN CIDNA HA WAYDIININ-
CAWAYSKII INAY CABASHO TAHAY CIDNA HA WAYDIININ-
CUQUBO INAY GALABSADEEN CIDNA HA WAYDIININ
CABSI INAA TIGREE LAGU SALIDAY CIDNA HA WAYDIININ-
CIMRIGOOD INUU JABAY KUWAAS CIDNA HA WAYDIININ-
Waxaa layidhi Nin xanuunsan ayaa qufacay dabeeto mid kale ayaa kuyidhi shifo, markaasuu ugu jawaabay lagala quusay! Waxaan sidaa uleeyahay Reer galbeedka oo caafimaadkooda la tacaali jiray markay xanuunsadaan ayaa ka quustay rajana lagama qabo inay ka kacaan cudurka doorkan haleelay!. Waxay kalsooni darro xoog leh kajirtaa gudaha baarlamaankiisa, golaha wasiirada iyo ururada ku midoobay EPRDF dhexdooda. Waxaa kadhex,socda dagaal qadhaadh kadib markay xubnihii la cabudhin jiray soo dhiiradeen. Lama odhan karo wax awaamir ah ayaa dalka ka shaqeysa, xaalkuna waa muran iyo faro isku tag,tag! Isku soo wada duuboo markii laga reebo Adis Ababa oo amnigeeda loo xilsaaray ciidankii Milatariga lamana hayo meel kale oo uu ka shaqeeyo maamul dawladeed!.
Gabagabadii waxaan inoo rajeynayaa aniga iyo idinkaba inaynu u noolaano kala yaaca iyo kala haadka uu la kulmi doono waqti aan dheerayn wadanka la isku qasbay ee wata mgaca gacan ku samayska ah.